China Common Aluminium Profile profiles and factory | Huajian
Ny varavarankely vita amin'ny alimika dia ampiasaina betsaka eo amin'ny sehatry ny injeniera fananganana noho ny hatsaran-tarehiny, famehezana ary tanjaka avo lenta aorian'ny fitsaboana eto an-tany, ny mombamomba ny alimo aluminium dia mamirapiratra ary mamirapiratra, mampiseho loko sy vokany samihafa.
Ny varavarankely vita amin'ny alimika dia ampiasaina betsaka eo amin'ny sehatry ny injeniera fananganana noho ny hatsaran-tarehiny, famehezana ary tanjaka avo lenta aorian'ny fitsaboana eto an-tany, ny mombamomba ny alimo aluminium dia mamirapiratra ary mamirapiratra, mampiseho loko sy vokany samihafa. Ny baravarankely dia lehibe ary azo rakotry ny faritra fitaratra lehibe, ka ny jiro ao anatiny dia ampy sy mamirapiratra, izay manatsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny endrika ivelany sy ivelany, ary mahatonga ny efitrano hierarchical kokoa. Mora ny mamoaka ny mombamomba ny aliminioma aliminioma, ny refin'ny zana-kazo momba ny profil dia marina, tsy misy afo ary misy hamandoana, ary tsara ny famehezana.
Ao amin'ny alimana Huajian, azonao atao ny mahita ireo varavarana sy varavarankely mahazatra malaza indrindra eran'izao tontolo izao, manana varavarankely sy varavarana mihetsiketsika maromaro izahay, ohatra: fitaratra fitetezana andian-tsarimihetsika 70, fitaratra fitetezana andian-tsarimihetsika H95-90, 50 varavarankely ahantona mihantona, varavarankely mihantona 50B, varavarankely mihantona 30M, varavarana mihantona 45 andiana, varavarana lohataona 58M, varavarana herinaratra andiany DDM, varavarana fonosana fandroana fandroana andian-doha GDM sns.
Ny mombamomba ny alimo aliminioma dia fitaovana ara-drafitra vaovao misy lanjany maivana, tanjaka avo, fitondra-tena tsara sy fitarihana hafanana, fisehoana tsara tarehy ary fiarovana ny tontolo iainana. Izy io dia manana toetra mekanika sy fananana fanodinana tena tsara, noho izany, amin'ny fampiasana ny profil alimika alimika mba hanaovana varavarana sy varavarankely manana insulation hafanana tsara, fanoherana ny rivotra, insulation feo, fanoherana ny harafesina sns.
Raha ampitahaina amin'ny varavarana sy varavarankely nentim-paharazana, ny varavarana sy ny varavarankely aluminium dia manana tombony maro:
1, plastika matanjaka: ny mombamomba ny alimo aliminioma dia karazana metaly metaly, izay vita amin'ny aliminioma sy singa vy isan-karazany. Izy io dia manana tombony tsy manam-paharoa amin'ny mombamomba ny firaka hafa: lanja maivana sy tanjaka avo lenta ary azo alaina ao anaty mombamomba ny fizarana sarotra mba hamenoana ny fepetra takian'ireo mpamorona varavarana sy varavarankely vaovao.
2, fampisehoana famehezana tsara: ny tetezana manapotipotika alimina alim-baravarana dia manana fihenjanana mafy amin'ny rivotra, fahamafisan'ny rano, fanamafisana ny hafanana ary fananana fanamafisam-peo, izay mety amin'ny fampiharana manokana isan-karazany eo amin'ny indostrian'ny varavarana sy ny varavarankely.
3, androm-piainana lava: ny tombo-kase alimo alimo dia manana tombony amin'ny lanja maivana, tanjaka avo, fanoherana ny harafesina, fiovana kely, fanoherana afo mahery ary fiainana maharitra (50 taona mahery).
4, Fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitsitsiana angovo: nylon, karazana fitaovana fanamafisam-peo hafanana, dia ampiasaina hananganana tetezana mangatsiaka sy mafana eo anelanelan'ny mombamomba ny anatiny sy ivelany, mba hampihenana ny fampidirana hafanana amin'ny firaka aliminioma ary hahatratra hafanana sy feo tsara effets insulation.
5, fanoherana ny toetr'andro tena tsara: ny ambonin'ny firafitry ny alimo aluminium dia mahatohitra ny harafesin'ny asidra sy alkaly ary tsy voakasiky ny fahalotoan'ny rivotra, ny orana asidra ary ny ozon. UV mahazaka, fikojakojana maharitra ny loko sy ny famirapiratana.
6, Vokatry ny haingon-trano tsara tarehy: ny faritra ambonin'ny firafitry ny alimo aliminioma dia azo zahana amin'ny teknolojia fitsaboana isan-karazany, toy ny fonosana vovoka, fanodinana, elektroforesis, fanodinana famindrana voa, sns., Miaraka amin'ny loko sy loko hazo isan-karazany, izay afaka mihaona ny filan'ny karazana haingon-trano sy ny fitafiana tsara tarehy hanaovana trano.
Teo aloha: Fantsom-baravarankely sy varavarana Aluminium
Manaraka: Fanaka Aluminium
Fantsom-baravarankely sy varavarana Aluminium